Ngidinga i-visa ye-Dubai? izinyathelo zokuthola umsebenzi! 🥇
Ngidinga i-visa ye-Dubai?
Imisebenzi yehhotela eSri Lanka - Isiqondiso Somsebenzi
Ngidinga i-visa ye-Dubai ?. Lo mbuzo okufanele uphendule ngawo. Ukuthuthela e-Dubai nge-yethu incwadi eningiliziwe yabathuthukisi. Uneminyaka eminingi emakethe yokuqasha. Manje usebeke umhlahlandlela oningiliziwe wendlela yokuthola umsebenzi e-Dubai. Baningi kakhulu abafuna umsebenzi bamazwe omhlaba. Bonke bafuna umsebenzi eDubai. Ngomhlahlandlela wethu onemininingwane, uzokwandisa amathuba akho. Kunezinto eziningi eziningi okudingeka uzilandele. Sengisho nje, befuna umsebenzi eMpumalanga Ephakathi kuzothatha umzamo wakho nesikhathi. Ithimba lethu likulungiselele umhlahlandlela oningiliziwe.
Unalokhu engqondweni, iqembu lethu liyasiza ama-expatriates amasha aqaphela i-UAE. Ngokuvamile, uzodinga kusuka Ukwaziswa kwe-A kuya kweZ lapho uhambisa e-Dubai. Ngazo zonke izindlela, uma ungathanda ukuba yisizwe eMpumalanga Ephakathi. Ngokuqinisekile uzodinga ukulandela yethu Umhlahlandlela we-10 wesinyathelo sokusesha nokuthuthela e-Dubai. Ithimba lethu njalo ukunikeza abafuna umsebenzi emsebenzini e Dubai, Abu Dhabi, noSharjah.
Kunezinhlobo eziningana izingcezu zolwazi eziphelelwe isikhathi online. Ikhulukazi kumabhulogi amadala ukuthi ungathuthela kanjani eDubai ngomsebenzi. Iqembu lethu lochwepheshe libheke phambili ukukusiza ngomsebenzi wakho wokusesha. Inkampani iDubai City Company ikwazile ukuthola imininingwane mayelana nokufuna umsebenzi eDubai. Inkani nje ungayithola kanjani i-visa kuHulumeni wase-UAE. Ngaphezu kwalokho ukuthi ungabhuka kanjani izindiza nokuthi ungayithola kanjani ifulethi ukuze uhlale e-United Arab Emirates. Lo mhlahlandlela onemininingwane ikakhulukazi kubantu abahlala kwelinye izwe futhi befuna umsebenzi e-UAE.
Isinyathelo No.1 Ukukwazi ukuqondisa i-Dubai
IDubai ingenye yezindawo ezisemhlabeni. Ikakhulu abafuna umsebenzi. Udinga ukwazi ukuthi uMuzi WaseDubai utholakala kuphi. Yini ethandeka kakhulu eMiddle East? Ngabe imboni yehhotela noma i-Oyili negesi, isakhiwo sethu sonke sedolobha .. Ngakolunye uhlangothi, udinga ukwazi ukuthi iDubai City. Wazi kahle ngamagugu amasiko amangalisayo. Ngaphezu kwalokho, abantu bendawo eMiddle East ukwamukela zonke izivakashi e-UAE. Futhi, Abafuna imisebenzi yamaSulumane basePakistan. E-Dubai indlela yokuphana iyindlela yokuziphatha yezivakashi ezintsha. Enye into oyidingayo ukuthi i-UAE iphezulu.
Dubai iyinkolo yama-Islam nayo yonke into expat entsha kufanele yamukele le ndlela yokuphila yelanga unyaka wonke. Chofoza esithombeni esingezansi. Futhi uthole ukuthi yini oyidingayo ukwazi ngeDubai. Ngidinga i-visa ye-Dubai?. Konke ngempela kuxhomeke kuphi. Abantu abaningi baseYurophu naseCanada bayakwazi ukuthola i-visa. Kunzima kakhulu kungenxa yamazwe aseMelika.
Isinyathelo No.2 UAE nolwazi lwe-visa
Ngokulinganayo kubalulekile ukwazi iDubai. Ukwazi ukuthi ngabe ukufanele yini ukungena kwi-United Arab Emirates. Ngokwesinye isandla, ngaphambi kokuba uhlele ngisho nokuya e-UAE. Kufanele uhlole passport yakho kanye nezidingo ze-visa. Ngasikhathi sinye, kuzoba ukuhamba okuhle. Qiniseka ngamaphesenti angaphezu kwekhulu lokho ungahamba ngokuphepha.
Ngabe ngidinga i-visa ye IDubai ne-Emirates?. Yebo, udinga ukuba ne-visa elungile esandleni sakho lapho ufika e-UAE. Ngaphezu kwalokho, kufanele usebenzise futhi ubuke ulwazi lwe-UAE visa. I-airline ye-Emirates ifake lonke ulwazi kuwe. Ngakho kufanele ulifunde ngokucophelela, futhi uthole ukuthi yini oyidingayo ngokuhamba.
Iningi lamazwe kudingeka ukuba ube ne-visa evumelekile uma idingeka. Futhi nokuba nephasiphothi elivumelekile okungenani izinyanga eziyisithupha. Ngakolunye uhlangothi kukhona nababambe amaphasiphothi angajwayelekile njengosopolitiki. Ngalesi sizathu kulesi sinyathelo njalo qiniseka ukuthi unesicelo esihle somsebenzi. Sicela uhlole ukuthi yimaphi amadokhumenti okuhamba angadinga ukuthuthela e-Dubai. Njengoba sekuphawulwe ukuthi i-Emirates nayo inezidingo ezihlukile zokungenela abafuna umsebenzi. Ngaphansi kwalezi zimo, kulesi sinyathelo sicela uphinde uphinde uhlole izingxoxo ezihamba phambili e-Dubai. Okudingayo ukufaka isicelo se-visa ukuze ufaneleke ukufaka i-UAE. Futhi, funda elinye ipasipoti Izidingo ze-UAE.
Isinyathelo No.3 Hlola izinhlobo ze-visa
Esinyathelweni No.3 esisidingayo ukuthola uhlobo lwe-visa esingaba nayo. Isibonelo, singaba ne-visa yesikhathi eside esisodwa sokungena se-VNUMX sezinsuku. Futhi ekusebenzeni i-visa e-Dubai. Kanye nezinsuku ze-30 nezinsuku ze-14 ngezinjongo ezilula zamaholide. Njengoba unikezwe la maphuzu, vakashela uhulumeni.ea i-portal esemthethweni. Bheka ukuthi yi-visa ongayithola nokuthi imayelana nani. Mfo, ungaba nesinqamuleli isikhathi se-visa.
Yisiphi pater okufanele ngibe naso, noma Ngabe ngidinga visa ye-Dubai? ngaphambi kokuba ngihambe ?. Yonke le mibuzo ungayithola ngewebhusayithi kaHulumeni. Unokhetho oluningana, futhi kufanele ube nocezu lolwazi olunemininingwane. Ikakhulu okuhle kakhulu kuvela emithonjeni emihle ethembekile. Futhi akukho okuthembekile kunoHulumeni we-UAE. Ungase futhi thola olunye ulwazi oluhlobene nomsebenzi wakho wokucinga e Dubai nase-Abu Dhabi. Ngenxa yewebhusayithi yakwaHulumeni kusiza izivakashi ezintsha nge-MBA ukuthi zihlale futhi zisebenze e-UAE.
I-Visa Yesikhathi Eside Yabavakashi - kakhulu Kunconyelwe abokufika abasha !.
I-30-day tourist visa, engadluliselwa ezinsukwini ezingu-40 - hhayi kunconywa kwabafunayo bemisebenzi.
I-visa yensiza yezinsuku ze-14, nje ngamaholide hhayi abokufika.
Usuku lwe-30 Vakashela i-visa, engadluliselwa izinsuku ezingu-30.
Isinyathelo No.4 Manje ungakwazi ukubhuka i-visa ngaphambi kokuthuthela e-Dubai
Kulungile, manje sesiyazi uma ungangena eDubai. Uyazi ukuthi konke kumayelana ne-visa noma for female expat. Isinyathelo esilandelayo okufanele sisilandele. Bhuka i-visa ukuze ungene e-United Arab Emirates. Inkampani yethu bacwaninga isikhathi eside ngalokho. Futhi uhlelo olulula kakhulu lokubhuka i-Etihad UAE visa system. Ngasohlangothini oluhle, uma uvela emazweni kusuka ku-UAE Uhlu lukahulumeni. Ngokuvamile, awudingi visa ngaphambi kokungena e-UAE. Isibonelo, uma ufika Isikhumulo sezindiza sase-Abu Dhabi International. Emizuzwini embalwa, abasebenzi bezindiza bazobe qhubeka ngenqubo yokufuduka yakho. Futhi ngomzuzwana uzothola i-visa lapho ufika.
Ngenkathi uhlelo lokundiza i-Etihad Ngabe ngidinga a visa yeDubai?. Njengoba uhlela ukundiza kuphela akudingeki ube ne-visa. Uma ubhukha indiza, khona-ke uyakudinga. Kepha ngasohlangothini oluhle, ungakwenza ku-inthanethi. Leyo akuyona inkinga ukuqala imisebenzi yokuphepha e-UAE.
Kodwa futhi ubuke amanye amawebhusayithi. Hlakaniza futhi uqhathanise amanani.
Ukuya e-Dubai Etihad UAE Ikhasi lokubhuka le-visa
I-AirArabia imibhalo kanye ne-visa
Emirates amasevisi we-visa ngaphambi kokuba ufike e-Dubai
FlyDubai athuthela Dubai futhi Usizo lwe-visa lwe-UAE
Isinyathelo No.5 Thola indawo yokuhlala e-Dubai
Ngaphambi kokuthi uye eDubai. Udinga ukusesha futhi ugxile ezindlini ezisetshenziswayo eDubai. Ngalesi sizathu, kufanele ufune igumbi elishibhile kakhulu. Ngaphezu kwalokho, igumbi elibanzi alikona thayipha uzotholakala ukuze uthathe. Vele, udinga ukuhamba ngaphandle kokuthatha uMndeni wakho. Ngokuhamba kwesikhathi, bazokhiqiza imali kuphela. Ekuqaleni, udinga ukonga imali lapho ufudukela eDubai. Ikakhulu kusuka emazweni afana neMalaysia noma i-India. Sebenzisa imali encane ngangokunokwenzeka ngefulethi noma igumbi. Udinga ukusesha indawo yokuhlala eyabelwe ngokukhetha. Ungabiza abanikazi bendawo noma uxhumane nge-imeyili. Qiniseka ukuthi uzoba nakho konke okukhona. Ngaphambi uzothuthela ku-UAE. Futhi, amathiphu amahle ukucinga igumbi e-Abu Dhabi futhi Sharia. Kunezakhiwo eziningi ezishibhile zokuqasha.
Ngidinga i-visa ye-Dubai ?. Yebo, uzodinga, futhi kukhona iphoyinti. Ukuze uthole i-visa yokusebenza ngokushesha. Ungakwazi isicelo semisebenzi yokuphatha e-UAE. Ngoba ngale ndlela uyanda ngokuthola indawo yokuhlala enhle. Vele ngoba izinkampani zizotshala imali eningi kakhulu ukukuqasha. Futhi unalokhu engqondweni, amathuba endawo entsha yokuhlala kuzoba yisivumelwano sangempela.
Isinyathelo No.6 Ukuya e-Dubayi nasezindiza zendiza ye-Book kuya e-Dubai
Sonke siyazi ukuthi izindiza azibizi abafuna umsebenzi omusha. Ngakho-ke zama ukugcina imali oyisebenzisile iphansi ngangokunokwenzeka. Thola izindiza ezihlisiwe eziya eDubai. Ngakolunye uhlangothi, iDubai isalokhu iyindawo eyinhloko zezikhala zemisebenzi zaseMiddle East. Kepha ungasesha izindiza ku-Abu Dhabi futhi. Ukuthuthela eDubai kuhlala kubiza kakhulu. Akunandaba ukuthi isikhathi esingakanani uzobe ufuna izingcezu zezeluleko. Ngasohlangothini olubi, uzodinga ukonga imali ethile. Ngoba lapho ufika e-UAE. Uzodinga ukuthi ube nayo endaweni yayo. Ukuhlala e-United Arab Emirates. Akuyona yini into eshibhile.
Ngidinga i-visa e-Dubai?
Isinyathelo No.7 Uvele ufike manje ulungele ukuhamba ngomakhalekhukhwini!
Kusukela ufika e-Dubai Airport. Udinga ukulungisa ifoni yakho yeselula ukuhamba ukufuna umsebenzi. Ngenxa yalesi sizathu, sikuqondisa kancane. E-United Arab Emirates yizona ezimbili eziyinhloko zesevisi ezihamba phambili zesevisi. Zitholakalayo kuzo zonke izifiki. U-Etisalat no-du, bobabili bahle ngawe njengomuntu omusha lapho ushukuthela e-Dubai. Konke kuncike kulokho okudingayo ukuphatha ukuthola insizakalo yeselula ekhokhelwa ngaphambilini.
Akukho mehluko omkhulu ngokuphathelene neselula e-UAE. Umehluko omkhulu phakathi kwalezi zisebenzi zombili ngukuthi umnikezeli weselula. Ukushaja abasebenzisi kuphela kwesibili. Futhi ngakolunye uhlangothi, i-Etisalat ishaja iminithi ngomunye umsebenzisi. Kepha akudingeki ukhathazeke. Zombili izisebenzisi zeselula zilawulwa zilawulwa futhi zigcinwa abasebenzisi. Amanye amathiphu ukuthi awasebenzi e-UAE kuphela. Kukhona futhi okuningi AmaNdiya abasebenzi baseKwait ngubani okwamanje owenza lokho.
Ukuba nefoni Ngidinga i-visa ye-Dubai ?. Yebo ... lapha unabo opharetha abakhulu be-2.
Etisalat umakhalekhukhwini e Dubai
Du mobile e Dubai
Isinyathelo No.8 Ukulungiselela i-Resume ne-Cover yakho ye-Dubai
Abaphathi bokuqasha eDubai ngifuna i-CV ngayinye. Kepha ohlangothini olubi oluzungeze i-2-5 lesibili ku-Resume ngayinye. Ngakho-ke udinga ukuthi uqalise kabusha ngokumangalisayo nangokungenabala ukuze uqonde imininingwane yakho yobungcweti. Ngamazwi ambalwa, i-CV yakho akufanele ibe ngaphezulu kwamakhasi we-2-3. Ekuqhubekeni kwakho okuhle kufanele kufaka imininingwane yobungcweti kuphela. Okuyisisekelo Ukuqhubeka nokubhala kuthunyelwe ngu-Forbes.com Kukhona ingxoxo enkulu nxazonke abafuna umsebenzi ku-2018 no-2019. Yini okufanele yenziwe ekubhaliseni okuqhubekayo nokuthi yini engafanele kamuva kulesi sihloko.
Kodwa kukhona okunye okuhlukile ekubhalweni kwe-CV. Isibonelo, uma ukhona ukufaka isicelo sesikhundla esiphakeme e-Dubai. Kukhona indlela eyingqayizivele yawo wonke umzingeli wemisebenzi. Ngokwengxenye enkulu, uma izimo ngoba umsebenzi uyadingeka. Kufanele unwebe amandla akho wokubuyela kumakhasi we-3. Ngezikhathi ezithile kwamanye amazwe emhlabeni. Ukuba nezindlela zabo zokwenza ukuqala kabusha. Amanye ama-CV akhuluma ngokujwayelekile amafushane kakhulu. Kufanele futhi ubhekwe I-Forbes eMpumalanga Ephakathi i-resume ephelele ukuqondisa abafuna umsebenzi.
Ngakolunye uhlangothi, ungaqasha abaphathi bezobuchwepheshe be-CV ukubhala. Ngokwesibonelo Abalobi be-Copeperrur CV. Ungakwazi ukuqasha cishe u-$ 30 kumlobi we-CV omuhle kakhulu. Kodwa uma kungcono kakhulu kuwe. Ungakwazi thola i-CV entsha njengaphansi kwe- $ 5 ku-Fiverr.com. Kunezindlela eziningi zokuthola i-CV yakho efanele. Kepha ungazibhalela wena. Ngezansi une- Independent.co.uk Umhlahlandlela onemininingwane yokuthi ungayenza kanjani ngendlela efanele.
Isinyathelo No.9 Ukudala amaphrofayela omphakathi
Ngaphambi kokuthi uye ku isinyathelo esilandelayo bese uqala ukuthuthela eDubai. Udinga ukudala amaphrofayli wokuxhumana nomphakathi. Inkampani yethu idale uhlu oluphelele. Uma nje kunencazelo enemininingwane ngayinye ingosi yokuqashwa. Ngaphezu kwalokho, sibeke izinkampani zokuxhumana ezilinganiselwe kakhulu eDubai. Lapho udinga ukuqala ukudala iphrofayili yakho. Akukho umlingo ukhiye ekusebenzeni kwakho kwamanye amazwe. Ngalesi sinyathelo, udinga ukwenza iphrofayili eningiliziwe kwiwebhusayithi ngayinye. Ngakho yenza kahle futhi uye ekugcineni okulandelayo inqubo ekusebenzeni kwakho emsebenzini. Ngidinga i-visa ye-Dubai? ngisho naku-Linkedin ?.
Yebo, lapho ungathola izinkampani eziningi. Ngokwesibonelo, Emirates Group iqasha ku-Linkedin. Ngokwesinye isandla, izinkampani zezimoto ezifuna izidingo. Kukhona amathuba cishe angapheli kunoma ngubani. Ngakho-ke, inkampani yethu yeluleka abafuna umsebenzi ukuthi babe nephrofayili eqinile kakhulu. Ngoba empeleni, ungazibuza ukuthi ngidinga i-visa yini eya eDubai ?. Futhi bese kuvela ithuba. Futhi ungashiywa ungenalutho.
Isinyathelo No.10 Usebenzisa i-Dubai City Company
Dubai City Inkampani Silapha ukukusiza ukuhambisa eDubai!. Ngokumangalisa kwethu izinsizakalo zokuqasha. Ngokuqinisekile uzothola umsebenzi wephupho e-UAE. Empeleni, inhloso yethu iwukuthi sikusize ukuthi ubekwe e-Dubai. Umgomo wethu omkhulu ukuphatha umsebenzi wokufuna. Kepha sinethemba lokuthi uzosebenzisa insizakalo yethu. Futhi uzothanda inkampani yethu. Izinsizakalo esizinikezayo ziyasiza ngempela. Eqinisweni, konke mahhala.
Eyaziwayo yethu inkampani e Dubai ngezisebenzi zomhlaba wonke. Isiza ngaphezulu kwezinkulungwane ezingamashumi amahlanu abokufika abasha ukuba babe yisisebenzi. Ukunikeza amathiphu wamahhala nezimpendulo. Isibonelo, ngidinga visa yokuya eDubai, noma ukuthi ngingawuthola kanjani umsebenzi eDubai futhi indawo efanele yomsebenzi?. Konke lokho esingakuphatha ngakho.
Xhumana nabaqashi nabaphathi abaqashisayo
U-Linkedin unakho umphakathi omkhulu wokuqasha. Ngaphakathi kwenethiwekhi yezokuxhumana, ungaxhumana nabantu abangaqashi ngendlela eqondile. Ngakolunye uhlangothi kusuka Umbono wokufuna umsebenzi we-Dubai. Yindlela engcono kakhulu yokuthola umsebenzi. Ukusebenzisa isevisi yethu ngokufanele kukusiza uxhumane nabaqashi abaqashiwe. Ngezinsizakalo zethu, ungaxhumana nabaphathi abaphezulu be-5,000 eDubai City. Kufanele nakanjani uxhumane nezwe labaqaphi bemidiya yenhlalo. Iyacinga umsebenzi omusha egameni lama-headhunters ezinkampani. Kuyindlela ehlakaniphe kakhulu.
Nge-LinkedIn yesevisi yethu, ungakwazi ngokuqinisekile ukuthuthukisa umsebenzi wakho. Phinda kabili amathuba ukuthola amathuba afanele emisebenzi e-Emirates. Ngalesi sikhathi esisheshayo uma nje ufuna entsha umsebenzi noma ithuba lomsebenzi noma nje ugcine umsebenzi wakho uvule ngaphakathi kwe-UAE.
Amaqembu e-WhatsApp emisebenzi e-Dubai
Ungasesha nakanjani umsebenzi. Kuyamangaza eMiddle East. Joyina amaWhatsApp Amaqembu ngaphambili. Faka inombolo yakho yeselula kubaphathi bokuqasha. Xhuma nabanye abafuna umsebenzi, ama-expatriates, kanye nabaphathi abangochwepheshe. Ngokujwayelekile kukhulunywa ngabanogqozi olukhulu. To uthole umsebenzi e-United Arab Emirates.
Inkampani yethu idale amaqembu amaningi abafuna umsebenzi. Kuze kube sikhathi samanje amaqembu we-WhatsApp anomkhawulo. Kepha sinethemba lokuthi uzokwazi ukuthumela isicelo sakho kulabo abafuna ukuqasha kabusha. Ngaphezu kwalokho, iqembu lethu lokuqasha lizoba ngaphezu kokujabula ukukusiza ukuthi uthole umsebenzi eSaudi Arabia. Uma uthola ukunikezwa komsebenzi kwelinye lamaqembu ethu. Ngakho-ke, okwamanje, silindele imininingwane yakho yobungcweti. Ngenxa yakho isipiliyoni samakhasimende akho ngicela ungathumeli ukuphawula kogaxekile.
Thumela kabusha ku-Agence Agencies e-Dubai
Dubai City Inkampani, Kunye, ubeke zonke izinkampani zokuqasha eDubai. Manje usungathumela i-CV yakho. To izinkampani eziqashiwe zokuqashelwa e Dubai. Ungabheka futhi ukuthi basekhaya. Ukukusiza, ukuqashwa ngisho ngokushesha. Sifake izinombolo ze-imeyili nezinombolo zefoni. Ngakolunye uhlangothi uma usebenzisa lolu hlu lwabaphathi bokuqasha ngendlela efanele. Ngokuqinisekile, kukusize uthole iphupho lomsebenzi e-United Arab Emirates. Ngaphandle kokulibaziseka, udinga ukubuyekeza abaqashi kanye nokuqasha abaphathi. Ukuthi ungubani uvule amathuba amasha emisebenzi e Dubai.
Izinyathelo zokuthola umsebenzi njengochwepheshe?
Ngabe ngidinga visa ye-Dubai? izinyathelo zokuthola umsebenzi njengoba uchwepheshe?. Ngiyethemba unaso manje umhlahlandlela oningiliziwe wokusebenza e-Dubai. Ngabe ngidinga visa ye-Dubai? kusuka ku-AZ Izinyathelo ukuya ekutholeni umsebenzi njenge-Expatriate. Thola ukuthi udinga kanjani ngempela ukuba ne-visa, izindiza, nendawo yokuhlala e-UAE. Ngiyethemba konke lokho izingcezu zolwazi zinike imininingwane eyanele. Ngoba sinokuningi esingakuhlinzeka. Ungakukhohlwa lokho ungathola umsebenzi ezinkampanini zeBhange nezenkampani. Futhi banikeza imvume yokusebenza i-visa ku-UAE.
IDubai City Company manje ihlinzeka Imisebenzi yezingcingo efanele eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje ungathola izinkomba, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.